Great ZimbabweBy K. Kris HirstJune 7, 2013My BioHeadlinesRSSFollow me on:
Great Zimbabwe is the best known archaeological site dated to the Zimbabwe culture of the late African Iron Age. Architectural detail, Great Zimbabwe. Photo by Nite_Owl
Nearly 80 acres of masonry buildings and enclosures make up Great Zimbabwe, buildings which were built beginning in the 12th century AD by Zimbabwe culture people stacking courses of shaped local stone--the buildings are mortarless. The structures at Great Zimbabwe are massive, and the architectural details, including conical towers and embedded designs like the one above, make it a fascinating place to visit. The history of Great Zimbabwe is also fascinating: there is an abundance of archaeological evidence of connections with the medieval trade port of Kilwa Kisiwani and other Swahili coast towns, and thus access to trade goods throughout the Near and Far East. Read More
Guide to the African Iron Age
Guide to the Swahili Culture
African Iron Age Sites
Related ArticlesKhamiInyangaTop Picks: The Archaeology of AfricaGreat Business QuotesOther About.com Sites	Top Related Searcheszimbabwegpviernes junio
See More About:great zimbabwezimbabweafrican iron agezimbabwe culture